ဒီတခါလည်း ဟိုဟာ ဒီဟာ လာရှာတာပါပဲ။ ဇူလိုင်အိပ်မက်ကိုတွေ့တော့ လက်ချည်းသက်သက်ပြန်မသွားစရာမလိုတော့ဘဲ ရေးထားခဲ့ချင်တာလေးတွေရှိလို့ စီဘောက်ထကြမပြောတော့ဘနြဲ့ ဒီမှချက်ဝိုင်းထဲဝင်လာတာပါ။ မပန်ရေးထားတဲ့ ဇူလိုင်ရက်တွေကိုလား ကျနော်မရောက်ဖူးတဲ့ ကျောင်းတော်အရပ်တခအတွကိုလား တချိန်ကမုန်တိုင်းထန်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းသွေးစက်တွေအတွက် သွေးပန်းချီတချပ်လိုရေးချယ်ပြလိုက်တာလား ကျနော်ရေရေရာရာ ခွဲခြားလို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အားလုံးကရောတွေးပြီးတော့ နွယ်တပင်လို ကျနော့ရင်ကို ရစ်ချည်ဆွဲညှစ်သွားခဲ့လို့ပါပဲ။ ဖြစ်ရပ်မှန် ရှင်သန်နေဆဲသမိုင်း အာရုံမှတ်တမ်းတချို့နဲ့ ခံစားမှုစကားလုံးများကိုတွဲဆက်ရေးလိုက်တဲ့ ဒီ ဇူလိုင်အိပ်မက်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် မပန်။
မပန်ရဲ့ အိပ်မက်နဲ့အတူ လွင့်မျောသွားမိတယ်။
ကောင်းမှ ကောင်းပဲ မပန်ရေ။
တကယ်ပဲ ဘာမှကို ပြောစရာမရှိတော့ပါ။
နောက်ဆုံး အဖေချင်းကလဲ ခပ်ဆင်ဆင်တူ...
မပန် ပေးသမျှ.. အမအားလုံးရလိုက်ပါတယ်။
မပန်ရေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖတ်ရင်း ဇူလိုင်အိမ်မက်ထဲ နစ်မျောသွားတယ် တချက်တချက်မှာတော့ တွေးလို့ မမီလိုက်ဘူးဗျို
ဇူလိုင်အိပ်မက် ကိုဖတ်ရတာ အိပ်မက်တကယ် မက်နေရသလိုပဲ … ၉၆ ဒီဇင်ဘာ ညတည မှာ မြေကွက်လပ်မှာဝင် ပြီး အလေးပြုခဲ့ဖူးတယ်။ ပန်ဒိုရာရဲ့ post ကိုဖတ်ရင် သတိရမိတော့ ရင်ထဲမှာလေ….
“အဲဒီနေရာက ဘာလို့ ကွက်လပ်ဖြစ်နေရတာလဲဟင် ))))))))”
ကွက်လပ်တွေ ကွက်လပ်တွေက အများမှ အများကြီးပါပဲ မပန်ရေ...
ဒီတခါကတော့ “ရင်ထဲက လာသောစာ” ပေါ့၊ ဟုတ်လား မပန်။
ရေးမယ့်ရေးတော့လဲ ကြည်အေး စာတွေ ပြန်သတိရအောင်အထိ ပါလား…
Dear Pan Pan,
This is an impressionistic post including symbolisms representing the7July unforgettable images and memorable sensations!
အစအဆုံး ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာ သိချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင် သရုပ်ဖော်ရေးသွားနိုင်တာ ချီးကျူးတယ်ဗျာ.
ပြောချင်တာကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ မျက်စိထဲပေါ်လာအောင် ရေးသွားတာ ကိုယ့်အတွေးလေးတွေ ထပ်ထည့်မိပြီး ကြက်သီးတွေတောင်ထတယ်.
ဘာလို့ကွက်လပ်ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးနားမှာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲထိ ပဲ့တင်သံတွေ ကူးစက်သွားခဲ့တယ် မပန်ရယ်..
Hail to the martyrs who were brutally, unhumanly and recklessly killed on 7th July!!!
မြန်မာပြည်ကတော့ ဇူလိုင်အိပ်မက်ဆိုးတွေထဲက ခုထက်ထိ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးဘူးဗျာ။ ခုလို မှတ်မှတ်ရရ ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မလေး၊ ကိုနေမိုး၊ အစ်မကြီး ခင်၊ ဆရာမမေငြိမ်း၊ မယ်မောင်၊ မကေ၊ ပီတိ၊ ကိုပု၊ ကိုမောင်ရင်၊ မောင်ရန်၊ ညီညီ နဲ့ ဆီပုံးမှာ လာရေးသွားသူတွေ တိတ်တိတ် ဖတ်သွားသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပန်ဒိုရာ ၇ဇူလိုင် အမှတ်တရ ရေးဖို့ အစကတော့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုမောင်ရင်နဲ့ မမေတို့ စာတွေဖတ်ပြီး ဖြုန်းစားဖြစ်လာတဲ့ အတွေးကို ချရေးလိုက်တာပါပဲ။ ဘာစကားလုံး အသစ်အဆန်းတွေ ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ လှလှပပတွေ မှ သုံးမထားပါဘူး။ အတွေးအခေါ်တွေလည်း ထည့်မထားပါဘူး။
တခါတလေကျတော့လည်း ရသမြောက်ခြင်းဟာ ရေးသူကြောင့်ထက် ဖတ်သူတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ခံစားမှုနဲ့ စာဖတ်ခြင်းအနုပညာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။